Hoping for the ASEAN UNION, rather than disintegrating into smaller states | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ပြန်ကြားချက်-ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၂)
Angelina Jolie for World Refugee Day 2012 »
If we manage to extend ASEAN +++ concept, Eastern Indian States’ rebellion problems and Tibet problem could be partly solved as with the blessings of parent mother countries, all the people of ASEAN +++ could migrate, work, invest or trade freely anywhere away from the perceived oppressors.
Tags: Asean, Burma, European Union, Minority rights, Myanmar, Racial profiling, Southern Thailand, Thein Sein
This entry was posted on July 14, 2012 at 5:16 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “Hoping for the ASEAN UNION, rather than disintegrating into smaller states”
July 14, 2012 at 5:27 am | Reply
လူနည်းစု မြန်မာမွတ်စလင် များနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးမှု ဆောင်ရွက်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် …..By FB of
အဆက်ဆက်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များကြောင့် မြန်မာ ပြည်သူများသည် ဥပဒေစိုးမိုးမှု အရသာကိုမခံစားခဲ့ရချေ။ ဥပဒေအား လက်တ လုံးခြားလုပ်ခြင်း၊ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း ၊ ဆွေမျိုးတစ်စုကောင်းစားရေး ၀ါဒကျင့် သုံးခြင်း များကြောင့် ပြည်သူများသည် အဖိနှိပ်ခံ ဘ၀ သို့ရောက်ခဲ့ကာ လူအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အရသာ ကို ပြည်သူများမျှော် လင့်ခဲ့ကြ သည်။
အရပ်သားအစိုးရမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာဆောင်ရွက်လာ၍ ဒီမိုကရေစိခေါင်းဆောင်သည် ပြီးခဲ့သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
မဲဆွယ်ပွဲများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေစိုးမိုးမှု မ ရှိကြောင်းတရား ဥပဒေစိုးမိုး ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမဲ ဆွယ်စည်း ရုံးခဲ့သည်။ လွတ်တော် အတွင်းရောက်သည်နှင့် ပထမဆုံးဆောင်ရွက် မည့်ကိစ္စ သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဟု ပြည်တွင်းမီဒီယာများ သို့ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလိုလားကြသော ပြည်သူများမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် အားတခဲနက်မဲပေး ခဲ့ရာအ မတ် နေ ရာ ၄၃နေ ရာတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကံမမြို့နေမြန်မာ မွတ်စလင်များ ၏အိုးအိမ်စည်းစိမ်များ၊နှင့် ဗလီတစ်လုံးတို့မှာ ဧပြီ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဖျက်စီးခံရကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာရှိဗလီအား၁၂ရက်နေ့တွင် ဖြိုဖျက်ခဲ့ကြောင်းmmsy၊ မွတ်စလင်သတင်းစဉ် ၊myanmmarmuslim.net သတင်းများတွင်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
“အဲဒီဒေသတွေ မှာရှိတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်တွေရဲ့ အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေပျက်စီး ရုံတင်မဟုတ်ပဲမြန်မာမွတ်စလင် တမျိုးသားလုံး ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေတယ်။ လူတစ်စုရဲ့ အကြမ်းဖတ်လုပ်ရပ် ကြောင့် ဗုဒ္ဓတရားတော် နဲ့အညီကျင့်ကြံနေတဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ထုကြီးကိုပါ စော်ကားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ “
July 14, 2012 at 8:03 am | Reply
myanmar people need education.How to slove this problem?
July 14, 2012 at 9:26 am | Reply
Dear Nan @ Burma Digest, http://sanooaung.wordpress.com/2008/02/23/walk-with-me/
If anyone agrees with me, that is welcomed but purely coincidental. If anyone doesn’t, well, that’s normal and to be expected. I only wish people had less problems with me disagreeing with them, than I have with them disagreeing with me. 🙂